ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် မုန်လာဥနီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် မုန်လာဥနီ
- shwe pont
Posted by shwe pont on Oct 16, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
မုန်လာဥနီရဲ ့လူတွေအပေါ် အကျိုးဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပါဝင်မှုကတော့ သိကြပြီးတဲ့အတိုင်း၊ ကင်ဆာရောဂါမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အသားအရေလှပစေခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအပြင် တီဗီ အစီအစဉ်တွေထဲကနေပြီး နောက်တမျိုး ထပ်သိလိုက်ရပါတယ်။ မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေ သိစေဖို ့နဲ ့မသိသေးသူများ သိရှိပြီး အသုံးချလို ့ရအောင် ပြန်ပြီး ဂေဇက်မှာ ပွားလိုက်တာပါ။
မနေ ့က မြန်မာ့အသံကလွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တခုမှာ ကမ္ဘာ ့နေရာအနှံ ့အပြားက ကလေးများဟာ နှစ်စဉ် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုက မြင့်တက်နေဆဲလို ့ပြောပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ပြီး ပဋိဇိဝဆေးတောင်သောက်စရာမလိုတဲ့ နည်းကောင်းတခုကို လည်း ဖော်ပြပေးသွားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနေစဉ် ကလေး များသာမက လူကြီးများအတွက်ပါ အကျိုးရှိပြီး လျှင်မြန်စွာသက်သာစေတဲ့ မုန်လာဥနီ စွတ်ပြုတ်စားသုံးပေး ခြင်းပါပဲ။
၁။ မုန်လာဥနီကို ပါးပါးလှီးပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေထဲထည့်ပြုတ်ပါ။
၂။ အဲဒီမုန်လာဥနီနူးပြီးရေခမ်း သွားရင် မုန်လာဥနီကို ဇွန်း သို ့မဟုတ် ယောင်းမ
သို ့မဟုတ် ချေတဲ့အရာနဲ ့ချေပေးပြီးပါ။
၃။ ကြေသွားတဲ့ မုန်လာဥနီကို ဆားအနည်းငယ်နဲ့ရေအနည်းငယ်ထည့်ကျိုပြီး တစ်နေ ့ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်စားနိုင်သလောက်စားပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါတယ်တဲ့။
ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရင့် လူမအီမသာ ဖြစ်ပြီး နေရထိုင်ရ မကောင်းလွန်းလှတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားဖူးလို့ပြုလုပ်ပုံဟာ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အကျိုးများစေမယ်လို့ထင်လို့ပြန်လည်ဝေငှလိုက်တာပါ။
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်နေစဉ်မှာ ဒီလိုမျိုးစားသုံးပေးရင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုး တွေ အူနံရံမှာတွယ်ကပ်ပြီးဆက်လက်ပွားများခြင်းကိုပါမဖြစ်စေနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့။ လုပ်ရတာလဲလွယ်ကူပြီး လူတိုင်း ရေ သို ့မဟုတ် မသန် ့ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေစားမိတဲ့ အခါတိုင်း အခန် ့မသင့်ရင် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောခြင်း
ဖြစ်တတ် ကြလို့အသုံးဝင်တဲ့ နည်းကောင်းလေးပါ။ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်းကို ပေါ့ဆမိရင် အသက် အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်စေတတ်လို့မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။
About shwe pont
shwe pont has written5post in this Website..
View all posts by shwe pont →
သိုင်းကျုး ။ဖြစ်ခဲ့ ရင် ဓါတ်ဆားရည်ဘဲ သောက်နေတာ ..
အစားအသောက် ခေါင်းစဉ်အောင် ထည့်ပေးထားပါလား… လိုရင် ပြန်ရှာရလွယ်တာပေါ့..။
ပုံ – ဦးကြောင် ဂဇက်အယ်ဒီတာချုပ်မှူးဂျီး
ဒါဆို ဦးကြောင်ကြီးက ငပေါကြီး …. အဲဒါ ကဘုန်းကျော်ပြောတာနော် … သများမပြောဘူး …….
အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကြောင် ပြင်လို ့ရရင် ပြင်ပေးပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိုင် ကော်ပီ ရော် ပို ့စ် အန် ပလေ့ အင်မိုင်မေးလ် ဖော် ဒီဖျူးချား
ဝမ်းပျက်နေတာ 4/5 ရက်ရှိနေပြီ
ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလေးမို့ မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ် နီးစပ်ရာတွေလည်းလက်ဆင့်ကမ်းရမယ်။
နည်းလေးကို သိပ်သဘောကျပါတယ် …….. နောက်ဆို ကလေးငယ်တွေဖြစ်ရင် သုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ် …….
ရွှေပုံရေ … အထွန့်တက်မေးလိုက်ဦးမယ် … ကလေးတွေအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားများရှိမလားကွယ် .. လသားကလေးတွေမှာ ဖြစ်ရင်ကော တိုက်လို့ရပါသလား … အမထင်တာတော့ ရမယ်ထင်တယ် … အသက် (၆) လပြည့်တဲ့ကလေးကို မုန်လာဥနီနဲ့ ထမင်းကို ရောမွှေကျွေးတယ်ဆိုတော့ (၆) ပြည့်ပြီးကလေးငယ်တွေ ဝမ်းပျက်ရင် အဲဒီနည်းလေးသုံးလို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ……….. ဒီနည်းလေး စောစောသာသိခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ …….
အဲဒီအစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်သူကတော့ လူကြီးရော ကလေးရောလို ့ပဲယေဘုယျ ပြောသွားပါတယ်။
မွေးစကနေ ၆ လအထိက မိခင်နို ့တမျိုးတည်းပဲ တိုက်လို ့မှတ်သားဖူးပါတယ်။
ပိုသေချာအောင် ၆ လ အောက်ကလေးဆိုရင်တော့ အရမ်းနုနယ်တဲ့အရွယ်မို ့ကလေးဆရာဝန် လို တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူနဲ ့မေးပြီးကျွေးမှသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ထမင်းစကျွေးတဲ့အရွယ်ဆိုရင် တော့ ရှော့ခ်မရှိလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့။
တခုစဉ်းစားမိတာက မုန်လာဥနီကိုလည်းသေချာ ရေစင်စင်ဆေးဖို ့လိုမယ်လို ့လည်းထင်မိပါတယ်။
ဈေးထဲကိုရောက်လာတဲ့ သီးနှံတွေဟာဆေးဖျန်းထားခါစ အသီးအနှံတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတတ်တာမို့သေချာစင်အောင်မဆေးမိရင် ပိုဒုက္ခများပါမယ်။
မုန်လာဥနီဆိုလျှင် blender နဲ့ ဖျော်တာကို သံပုရာရည်လေးညှစ်ထားတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ … ။
မုန်လာဥနီကို ဟင်းထဲ ချက်လျှင်တောင် … ရေနွေးဖျောတဲ့ အဆင့်လောက်ထိပဲ ချက်တယ်… အခုဟာက နူးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ..တခါမှတော့ မလုပ်ဖူးသေးဘူး ….. ။
အနံ ့အရသာ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိ .. စမ်းကြည့်ဦးမယ် ။
နည်းလေးက ကောင်းတယ်နော်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..တူလေးဝမ်းပျက်ရင် စမ်းလုပ်ကျွေး
ကြည့်မယ်….ဝမ်းကွဲအစ်မတစ်ယောက်ဆို မုန်လာဥနီအစိမ်းကို တို့စရာလုပ်စားတယ်…
ကောင်းတယ်တဲ့…မစားတတ်လို့ မစားကြည့်ဖူးဘူး….ဖျော်ရည်လည်း အာသီးပြဿနာရှိလို့
ဘာဖျော်ရည်မှ မသောက်ဘူး…တုန့်နည်းတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်…သံပုရာလေး စွက်လိုက်
တော့ မုန်လာဥနီစိမ်းနံ့သက်သာမယ်ထင်တယ်…ရေခဲမပါ ဖျော်သောက်ကြည့်ဦးမယ်…
အခုလိုဆေးဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲးတမ်းလိုလို စာလိုက်တော့မယ်။
နောက်ထပ် ကျန်းမာရေးပညာပေး စာသားများကိုလဲ ရေးနိုင်ပါစေ။
မကြာခဏအစားမှားပြီး ပြသာနာတတ်တတ်တာမို့ ဒီနည်းလေးကို မှတ်ထားလိုက်အုန်းမယ်။ တခါမှတော့ နူးအာင် လုပ်ပြီး မစားဖူးသေးဘူး။
မယ်ပုရေ – ဟိုလေ စာအုပ်လိုချင်တယ် ပြောပေမယ့် မယ်ပုရဲ့ မေးလ်လိပ်စာကို မရှာတတ်ဘူး။ ဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲ မသိဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာပြန်မေးကြည့်တာပါ။ အမမေးလ်လိပ်စာက poelaylar@gmail.com ပါ။
shwe pont ရေ – သီးခံပါနော်။
etone ရေ မုန်လာဥနီနဲ ့ပန်းသီးကို စက်နဲ ့ရောဖျော်တာလည်း သိပ်သောက်လို ့ကောင်းပါတယ် အရောင်လေးလဲလှတယ်။
နှင်းနှင်းရေ တို ့လည်း မုန် ့လာဥနီလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို အစိမ်းစားရတာ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
Mobile ရေ ကျွန်မလည်း မုန်လာဥနီကို အရသာလည်းကြိုက် အရောင်လေးကလည်းလှတော့ အသုပ်တွေလုပ်စားတိုင်း ဂျစ်လေးနဲ ့အချောင်းလိုက်လေးခြစ်ပြီး ထည့်သုပ်ဖြစ်တယ်။
ဆရာမပြုံးရေ ရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်ချင်ပါတယ်။ shwepont82@gmail.com ပါ။
shwe pont ရေ မုန်လာဥနီကို အစိ်မ်းလိုက် စားတာကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်..
ကလေးတွေကိုတော့ ထမင်းနဲ့ရောကြိုပြီးကျွေးဖြစ်တယ်.. အခုတော့ နောက်တစ်မျိုးတိုးတာပေါ့..
ကျေးှဇူးပါနော် shwe pont ရေ….